Tian'i Turkish Airlines hampitombo ny fizahantany any Palestine
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Tian'i Turkish Airlines hampitombo ny fizahantany any Palestine
Ny filoha tiorka Recep Tayyip Erdogan dia nandrisika hatrany ny Silamo mba hitsidika an'i Jerosalema, indrindra fa manoloana ny famindran'ny masoivohon'i Etazonia ny tanàna.
Nihaona tamin'ny minisitry ny fizahan-tany Palestiniana misahana ny fizahan-tany sy ny fahagola Rula Ma'ayah ny praiminisitra lefitra misahana ny varotra Tiorka Muhammed Fatih Durmaz tamin'ny sabotsy tao Betlehema.
Araka ny filazan'ny masoivohom-baovao Anadolu any Torkia, “ny Turkish Airlines dia vonona hiara-hiasa amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany any Palestine.”
Ankara dia mpanohana ny Palestiniana ary manana fifandraisana amin'i Hamas any Gaza ihany koa. Torkia no iray tamin'ireo mpitsikera lehibe ny faneken'ny Etazonia an'i Jerosalema tamin'ny taon-dasa.
Araka ny tatitra dia nilaza i Durmaz fa liana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny “fitondrana mpizahatany maro kokoa any Palestine.” Maherin'ny 130,000 ny teratany Tiorka nitsidika ireo faritra fehezin'ny Fahefana Palestiniana tamin'ny taon-dasa, hoy ny tatitra. Notaterin'ny Ammon News fa i Ma'ayah dia niresaka ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana Tiorka-Palestiniana sy ny “fahalalan'i Torkia” amin'ny olana Palestiniana.
Ny tatitra hafa dia nanamarika fa ity dia "toerana stratejika" ho an'i Torkia ary betsaka ny mety ho an'ireny mpizahatany ireny. Nanjary zava-dehibe kokoa i Torkia tato anatin'ny taona vitsivitsy momba io fanajana ny Palestiniana misy fitsangatsanganana sy delegasiona voalamina io.
Notaterin'ny gazety Hürriyet fa ny fitsidihana dia ampahany amin'ny ezaka Tiorka misimisy kokoa hanamafisana ny fizahan-tany any Jordania, izay nihaonan'ny Durmaz tamin'ny Jordanianana ihany koa. Faly ny haino aman-jery tiorka, indrindra ny fampahalalam-baovao mpanohana ny governemanta toa an'i Yena Şafak. Ampahany amin'ny fanohanana misimisy kokoa momba ny olan'ny Palestiniana manerana ny haino aman-jery tiorka sy ny vahoaka izany.
Ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Al Ain dia mandray ny sidina isan'andro mankany Jeddah mandritra ny Ramadany